GOOBIDDA IYO DARYEELLIDDA DHIR BARARKA BEERTA FURAN, GURIGA IYO AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO: GOORMA AYAA LAGULA TALINAYAA IYO SIDA SI HABOON LOO SAMEEYO BEERITAANKA UGU HOREYSA EE MIRAHA KALA DUWAN EE XIDIDKA ABRIIL? - BEER CAGAARAN
All oo ku saabsan beerta dhirta guga ee bannaanka u furan ama guriga. Maxay tahay daryeelka ugu horeeya?
Dhirta ayaa u qalantaa meel muhiim ah maaddooyinka loogu talagalay diyaarinta cuntooyin badan. Dhadhanka dhadhankiisa iyo caraf udgoonku wuxuu ka dhigaa cunnooyinka cunto badan iyo caafimaadkiisa.
Warshad waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin ah. Dhirta ayaa si madaxbanaan loogu beeri karaa dacha ama guriga.
In this article waxaan kuu sheegi doonaa waxa gaarka ah ee beeritaanka guga dhir waa, sida loo sameeyo si sax ah si aad u hesho goosashada wanaagsan, iyo sidoo kale sida loo xaliyo dhibaatooyinka la kulmay inta lagu jiro beerista.
Noocyada iyo kala duwanaanshaha beerashada xilliga gu'ga
Wixii dhir beeridda waa ka wanaagsan inaad doorato guga. Waqtiga ugu fiicani wuxuu bilaabmaa laga bilaabo Abriil, ka dib markii kulaylka iyo dhamaadka barafka.
Guga waa xilliga ugu wanaagsan ee lagu beerayo, maxaa yeelay waxay ka hortagi doontaa saameynta xun ee dhaxan abuurka. Qayb ka mid ah bannaanka u beeray warshad laga bilaabo October ilaa November, iyo sidoo kale muddadii u dhaxaysey Juun ilaa Luuliyo. Waqtiga abuurista waxay ku xiran tahay ujeedada beerto. Beeridda xilliga xagaaga waxaa loo baahan yahay cagaarka sii kordhaya xilli ciyaareedka soo socda. Laakiin haddii aad rabto in aad leedahay caleemaha hore ee dhir, ka dibna waxaa lagula talinayaa in ay ku beeri ku dhowaad bilawga ah ee jiilaalka.
Goorma ay ku beerato muddadan?
In dhir guga waa in la beeray ka dib markii bilowgii cimilada diiran iyo maqnaanshaha daboolka barafka iyo dhaxan. Beerta ugu horeysa ee geedo yaryar ayaa lagu taliyaa horraantii Abriil. Waxaa lagu talinayaa in la fuliyo soo degitaanka iyada oo la tixgelinayo tilmaamayaasha kalandarka dayax-gacmeedka. Waxay muujineysaa maalmo wanaagsan oo aan fiicneyn oo lagu beerayo dalagkan. Ficilka, bannaanka u badan isticmaalaan kalandarka dayaxa. Waxay ku salaysan tahay saameynta qaybaha miridhada koritaanka dhirta.
Cilmi-baadhayaashu waxay muddo dheer ku adkeeyeen Dayaxa wuxuu saameeyaa hab-nololeedyada dhirta. Sidaa darteed, waxaa la ogyahay in ay jiraan mudooyin wanaagsan oo ay ugu fiican tahay in dhulka la geeyo. Bishii Abriil, taariikhaha wanaagsan: 2,3,20 iyo 29, iyo Maajo, taariikhda wanaagsan waxay noqon doontaa 4,5,6,9,10,26 iyo 27 Maajo.
Dhir ayaa la kori karaa:
In dhulka furan (ee beerta).
Xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo (aqalka dhirta lagu koriyo, dheriga / sanduuqa daaqadaha).
Magaalooyinka waawayn, beerida dhirta daaqadaha ayaa caan ku ah, sababtoo ah dadku waxay rabaan in ay miiskoodu kor u qaadaan cagaar cusub iyaga oo koray gacmahooda. Laakiin waxaa fiican in ay ku koraan beerta. Dhulgariir, sida hore loogu soo sheegey, waxay u fiicantahay in laga bilaabo bilawga April, marka aanay jirin baraf, taas oo burburin kara dhirta. Inkasta oo ay iska caabbeen dhir udgoon (waxay u dulqaadan kartaa dhaxan ilaa 10 darajo), waxaa lagula talinayaa in lagu beero mudo ah marka uu dhaxan yahay mid aan macquul ahayn.
Sidee loo doortaa darajada?
Noocyada ugu habboon ee beerto guga. Dhir caleen caleen - waxay leedahay ur wacan iyo dhadhan weyn. Harvest waxaa laga heli karaa ilaa 2 - 2.5 bilood ka dib caleemaha ugu horeeya. Aragtani waxay ku siin kartaa cagaarka illaa dayrta.
Noocyada caleenta caleen.
Waxay natiijada keentaa 2 bilood ka dib biqilka. Caleemaha waxay muuqdaan 2 toddobaad kadib markaad beertid. Kala duwanaantu waxay u baahan tahay waraabin fiican.
Kala duulaya koboc aad u weyn. Dhaqamada ayaa diyaar u ah inay jaraan 2-2.5 bilood ka dib biqilka.
Fasalka hore ee bislaaday, waxaa suurtagal ah in la gooyo cagaarka 1.5-2 bilood ka dib biqilka.
Waxay leedahay duurka u habaysan. Kala duwan ayaa leh midab-gaar ah - waxay ku dhexjiraan aan ka horeyn 3 toddobaad ka dib markii la beero dhulka.
Of noocyo of dhir xidid yihiin ugu habboon: Bordikovskaya, wax soo saar, sonkorta iyo Berlin.
Xagee iyo intee in leeg ayaan ku iibsan karaa alaabada beerto?
Dhir xabu (baakad ku jirta 2g oo miraha ah) ayaa laga iibsan karaa Moskvi iyo St. Petersburg qiimaha laga bilaabo 2 ilaa 20 rubuc, taas oo ku xidhan noocyada kala duwan (Bogatyr -19 rrv, 2. caadiga ah). Magaalooyinkaas, qiimaha abuurka ficil ahaan ma kala duwan yihiin.
Talaabo tallaabo tallaabo ah: sida loo abuuro?
Dhirta waxaa lagu kori karaa guriga daaqadaha. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo noocyo hore u bislaaday:
Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho goosashada hore. Waxaad ku kori kartaa dalagyada dheriga ama sanduuq.
Nidaamka abuurka abuurka:
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu rusheeyo miraha 1-3 maalmood ka hor intaadan beeran. Waxaad u baahan tahay inaad baddashid biyaha 2 jeer maalintii, tani waxay xaqiijinaysaa abuuritaanka saaxiibtinimo. Haa, saacad ka hor beerashada, qoyi miraha xal manganese daciif ah.
Qaado weelka (dheriga ama sanduuqa) kana buuxi carrada. Weelka waa in lagu qalabeeyaa godadka dhuumaha. Ciidda waa laga qaadi karaa goob beerta ah ama laga iibsado dukaanka beerka. Waa inay ahaato mid bacrin ah, carrada madow waa mid ku habboon.
2-3 qaado oo ah superphosphate iyo jeeso ayaa lagu daray baaldi isku dhafka ciidda si bacrimiya ciidda iyo hagaajiyaan koritaanka ee xididdada geedo.
Digniin! Dhirku ma jecla in ka badan oo qoyaan ah ee ciidda, laakiin waxay u baahan tahay waraabin joogto ah.
Waxaa lagama maarmaan ah in sariirta lagu shubo biyo diirran iyo khafiif ah.
Safarada dhirta ku sameysma oo kudhigma 12 cm (noocyo kakan oo la kala gooyo ayaa yar). Waxa kale oo aad ku beeran kartaa noocyada caadiga ah ee buulshada beerto fogaan ah 10-12 cm midba midka kale.
Beeridda beereed waa in lagu sameeyaa qoto dheer oo qiyaastii 5 mm. Ciidda waa in la qoyo.
Si looga fogaado dhismaha qolof ah ciidda, ciidda waa inay ahaato budo leh lakabka yar ee dhulka dabacsan. Wixii beerta dhir ah ee ku yaala sanduuqa sanduuq kasta waxa loo baahan yahay in lagu kaydiyo.
Ka dib markii biqilka ah ee geedo, waa in si taxadar leh qoyan leh falejo si aanay u dhaawici caleemaha.
Ka dib 1 bilood ka dib biqilka ka dib, geedo waa la ridi karaa oo loo wareejin karaa dheryo gooni ah.
Markaas geedo waxaa lagu beeray dhulka, oo leh masaafada u dhaxaysa saf 12 cm, masaafada u dhexeysa waa inay noqotaa qiyaastii 6-8 cm.
U baahdo waraabinta wakhtiga ah, iyo sidoo kale bacriminta adag ee bacriminta.
Habka seedka. Koraaya by beero abuur waa habka ugu caansan oo hab fudud.
Daaridda waxaa la samayn karaa horraantii Abriil.
3 maalmood ka hor beerashada, miraha waxaa lagu qooyay biyo (biyo waa in la baddalo 2 jeer maalintii), 3 saacadood ka hor laga beerto, miraha waa in lagu qooyay xal daciif ah manganese. Qoynta ayaa kuu ogolaanaysa inaad nadiifiso abuurka saliidaha lagama maarmaanka ah ee ka hortagga koritaanka dhirta.
Dhirku wuxuu jecel yahay ciidda dabacsan oo bacrin ah. Goobta beeritaanka xilliga dayrta oo la bacrimiyo humus ama digada.
Guga, bacriminta adag oo ku jira superphosphate, chloride potassium iyo bacriminta nitrogen waa in lagu dabaqo ciidda. Waxaa fiican inaad ku dhajiso beertu meesha qorraxdu ka soo baxdo.
Waa muhiim! Dhir ayaa si liidata u kordhi kadib qoyska qafilan: karootada, dill, cilantro ama cumin. Ka dib iyaga, cagaarka beerta this aan la beeray karaa 3-4 sano kale.
Laga soo bilaabo qalabka loogu talagalay dhir koraya u baahan: majarafad, googo, rake, habka waraabinta. Marka koray qiyaasta warshadaha, ciidda dhirta dhirta ayaa la diyaariyaa iyadoo la adeegsanaayo xaansho iyo xayawaan. Seeds waxaa lagu beeray dhul furan sida safka caadiga ah - masaafada u dhexaysa safka waa 12 cm, masaafada u dhexeysa 6-8 cm. Meel qoto dheer oo beereedka ah waa qiyaastii 0.5 cm.
In lagu koriyo
Dhirta koriinka ah ee lagu koriyo ah waa mid aad u fudud ka badan dalagyada khudradda. Beerashadu maaha mid adag mana u baahnayso kharashyo dhaqaale oo gaar ah. Marka koray ee lagu koriyo, dhir ayaa la beeray dabayaaqadii January. Heerkulka looga baahan yahay 12 darajo. Xaaladda koritaanka heerkulka sare + 20 caleemaha dhirta ayaa qalaji doona. Parsley waxay u baahan tahay iftiin dheeraad ah jiilaalka. Waraabinta waa inay noqotaa mid dhexdhexaad ah. Qoyaanka ugu wanaagsan 75%.
Dheecaan ka badan ciidda iyo joogitaanka qoyaan ee ciidda waxay keeni kartaa cudurro iyo dhimashada dalagyada. Dhir geedo lagu beeray geedo lagu beeray ama beeritaanka abuurka. Xaaladaha, liistada iyo qorsheynta abuurka abuurka iyo geedo ee warshadani waxay la mid tahay beeritaanka dhul furan.
Ka dib markii lagu beero miraha carrada, waxay yihiin budo leh lakabka yar ee carrada, taas oo ah wax yar oo is dulfuulan iyo waraabiyo biyo.
Ka hor inta uusan soo bixin geedo, sariirta waxaa lagu dabooli karaa filim. Waa suurad wacan in ay biyaha waraabiyo ka hor inta aan laga beerin abuurka.
Ka hor inta uusan soo bixin sprouts, waxaad u baahan tahay si dhexdhexaad ah u qoyaan ciidda iyo cawska.
Ka dib markii biqilka, khafiifinta dhaqamada waxaa lagu fuliyaa (muddada dhismaha 2 ama 3 caleemo).
Sidoo kale samee bacriminta adag ee bacriminta, laba toddobaad ka dib, dib-u-quudinta ayaa la fuliyaa.
Maxay keeni karaan dhibaatooyin iyo sida loo xaliyo?
Dhibaatadu waxay keeni kartaa qoyaanka ciidda xad-dhaafka ah. Waxaa lagama maarmaan ah in looga hortago dibad-baxa ciidda, tanina waxay horseedi kartaa cudurro iyo dhimasho dhirta. Dhaqannada waxaa laga yaabaa in ay saameeyaan cayayaanka: duqsiga dabacasaha, qaraha iyo ubaxyada, nematodes, iyo cudurada fungal. Si loola dagaallamo, waxaa jira noocyo badan oo cayayaanka iyo fungicides. Ogaanshaha wakhtiga iyo daaweynta cudurrada cudurrada ayaa ilaalin doona dalagga. Inta kale ee beerista beerista dhirta waa mid fudud oo aan soo bandhigin dhibaatooyin gaar ah.
Horumarka dhirta waa suurto gal labadaba xaaladaha xagaaga xagaaga iyo daaqadaha daaqadaha ee aqalka. Dhirta ayaa u baahan baahida dadka, sidaas darteed sii kordhaya warshadani waxay noqon kartaa ganacsi faa'iido leh oo aan u baahnayn maaliyad maaliyadeed oo waaweyn.
Noocyada ugu wanaagsan ee basbaas ee Siberia
Noocyada Gloxinia Terry: sawirada iyo sharaxaadda
Gooseberry Malachite: dabeecadaha, khibrad iyo khibrad, talooyin ku saabsan sii kordhaya
Ka takhalusidda tuubooyinka beerta
Koraaya viburnum madaxtooyada: sida loo faafiyo buldenezh
Goosashada yaanyo waa qayb khasab ah oo ah maqaasiinka jiilaalka, iyada oo aan taas oo ku dhawaad ​​qoyska uusan sameyn karin. Tamaandho waa shey gaar ah oo ku raaxaysan kara sanadka oo dhan. Waxay iyaga ka diyaariyaan cuntooyin badan, cuntooyin iyo xitaa macmacaanka. Tamaandhada ku jira casiirka, tamaandhada la kariyey, la kariyey, cusbayn, casiir yaryar, yaanyo la qalajiyey, tufaax yaanyo - waa arrin si fudud loo samayn karo laga bilaabo jiilaalka, ka dib marka cuntooyinka aan tixgelino hoosta. Read More
Noocyada ugu fiican ee digaagga loogu talagalay taranta guriga. Waxyaabaha ugu weyn ee koritaanka iyo daryeelka
Sida loo doorto bamka wareegga ee kuleylka